WunZinMin Raja ဝန်ဇင်း မင်းရာဇာ: March 2015
Posted by Burman Managers,Engineers and Scientists at 2:06 AM No comments:
ဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ် မှ တဆင်ု သမတကြီး ဦးသိန်းစိန် ထံ သို့ ။
ကျောင်း သားများကို ရိုက်နှက် နှိမ်နှင်း ခြင်းမှာ တရားဥပဒေ နှင့် ညီ ပါတယ် လို့ ပြောခြင်းကား
မတရားမှု ကိူ အားပေး ခြင်း။ မတရားလုပ် ရပ်ကိုလုပ်ခြင်းဖြစ်တဲ့ အတည်ပြု ခြင်းဖြစ်ပ့၏။
တရား ဥပဒေ အရ ကျောင်းသားများကို အရေး ယူလိုက ယူ နိုင်ပါသည်။
သို့ သော် ရိုက် နှက်ခြင်း လုပ်ခွင့် ဗမာပြည် (မြန်မာပြည်) ဥပဒေမှာလည်း မရှိပါ။
ရိုက်နှက်ခွင့် ရှိတ်ာလို့ ပြောက လူကြီးမင်း သည် ဥပဒေ ကို မိမိ လက် ဝယ် ကိုင်တွယ်ပြီး
မိမိ သဘောဖြင့် ဆောင်ါရွက်ခြင်းဖြစ်တဲ့ အတွက် ပြည်ထဲ ရေး ဝန် ကြီးနှင်. ပြည်ထဲ ရေး ဒုတိဝ ဝန်ကြီး တို့ မှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။
မည် သို့ မျှ မငြင်းနိုင်ပါ။
ပြည်ထဲ ရေး ဝန် ကြီးနှင်. ပြည်ထဲ ရေး ဒုတိဝ ဝန်ကြီး တို ကို ရာထူးမှ ချကာ အလျင် အမြန် အရေးယူ ရ ပါမည်။ ထို သို့မဆောင်ရွက် က သမတကြီးနှင့် အစိုးရ တဖွဲ့ လု့း သည် ရုတ်ရင်း ကြမ်းကြုတ်စွာ စိန်လွင် ကဲ့ သို့ကျောင်းသား များကို ကိုးကန့် ရန်သူများထက်ပင် ပို သော အတိုင်းအတာ ဖြင့် မတရား နှိမ်နှင်း ခဲ့ ကြောင်း မှတ် တမ်းတင်ရ ပါမည်။
Posted by Burman Managers,Engineers and Scientists at 1:25 AM No comments:
credit-Ko Kyaw Swar Myint
Posted by Burman Managers,Engineers and Scientists at 1:44 AM No comments:
ပိတ်ဆို့ခံထားရသည့် သပိတ်ကျောင်းသားများ အစာငတ်ခံဆန္ဒပြမည်ဟု ပြောဆိုနေ
လက်ပံတန်းမြို့တွင် ပိတ်ဆို့တားဆီးခံထားရသော ပင်မသပိတ်ကျောင်းသားများသည် ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံနေသောနေရာတွင် ရှေ့သို့မတိုးနိုင်သောကြောင့် ထိုင်သပိတ်ပုံစံဖြင့် ရင်ဆိုင်နေရပြီး အစာငတ်ခံဆန္ဒပြမည်ဟု ပြောဆိုနေကြကြောင်း သပိတ်စစ်ကြောင်းတွင် ရောက်ရှိနေသည့် 7Day သတင်းထောက်က သတင်းပေးပို့သည်။
သပိတ်စစ်ကြောင်းတွင် ပါဝင်သော ရဟန်းသံဃာများနှင့် ကျောင်းသားများသည် ယနေ့နံနက် ၁၁ နာရီအချိန်မှစတင်ကာ အစာငတ်ခံဆန္ဒပြမည်ဟု ပြောဆို၍ ဆက်လက်ဆန္ဒပြနေကြခြင်း ဖြစ်သည်။ သာယာဝတီမြို့သို့ ချီတက်ရန် ထွက်ခွာလာသော ကျောင်းသားများသည် ၎င်းတို့တည်းခိုသည့် အောင်မြေဗိမာန်ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့် ၁ ဖာလုံအကွာတွင် တားဆီးခံရခြင်း ဖြစ်သည်။
ပဲခူးတိုင်းအာဏာပိုင်များက ကျောင်းသားများအား နံနက် ၁၀ နာရီအချိန်မှစတင်၍ ခြောက်နာရီအတွင်း လူစုခွဲရန် ကြေညာနေသည်။ ကျောင်းသားများကလည်း အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းမှုများမပြုလုပ်ရန် ရဲတပ်ဖွဲ့ထံ တောင်းဆိုထားကြသည်။
ထိုင်သပိတ်ဆင်နွဲနေသော သပိတ်မှောက်ကျောင်းသားများ - ဓာတ်ပုံ ငြိမ်းချမ်း
Posted by Burman Managers,Engineers and Scientists at 12:51 AM No comments:
ရဲတွေမှာ ကော်ပတ်ကြိုးတွေ ဆောင်ထားတာကို တွေ့မြင်ရပါတယ်။
ရဲတွေမှာ ကော်ပတ်ကြိုးတွေ ဆောင်ထားတာကို တွေ့မြင်ရပါတယ်။ ရုန်းရင်းဆန်ခတ် ဖြစ်တဲ့အခါ ကျောင်းသားများရဲ့ လက်ကောက်ဝတ်ကို စွပ်လိုက်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအခါ လွယ်လွယ်နဲ့ ပြန်ဖြုတ်မရပါဘူး။ စွပ်မိသွားတဲ့အခါ တစ်ဖက်စွန်းကို ဆောင့်ဆွဲလိုက်ရင် သွေးကြောတွေ ပိတ်သွားပြီး အစွပ်ခံရတဲ့ လက်တစ်ချောင်းလုံး ကျင်လာပြီး သွေးလေ မလည်ပတ်တဲ့အတွက် တောင့်တင်းလာပါလိမ့်မယ်။ မသိတဲ့ ကျောင်းသားတွေက ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်လည်း ပြတ်ချင်ဇောနဲ့ ဆွဲရင်း တင်းသထက်တင်းလာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီကော်ကြိုးတွေကို ကတ်ကြေးကောင်းကောင်းနဲ့သာ ဖြတ်လို့ရပါတယ်။
Posted by Burman Managers,Engineers and Scientists at 12:36 AM No comments:
Posted by Burman Managers,Engineers and Scientists at 12:27 AM No comments:
Credit :Thitsar Phyu
လက်ပံတန်း ကျောင်းသားသပိတ် နောက်ဆုံးအခြေအနေ မြင်ကွင်း.......ကျောင်းသား သပိတ်စစ်ကြောင်းနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ လုံခြုံရေးအင်အားတွေဟာ လက်ရှိနေရာမှာပဲ လက်ရှိ အနေအထားအတုိုင်း ဆက်နေဖုို့ နှစ်ဖက် သဘောတူညီ၊ မနက်ဖြန် မတ်လ ၄ ရက်နေ့မှာ ကျောင်းသားတွေနဲ့ နယ်လုံဝန်ကြီး ဗုိုလ်မှူးကြီးသက်ထွန်းတုို့ ဆက်လက် ညှိနှိုင်းမည်။
ဓာတ်ပုံ - ကောင်းထက်ကျော် (DVB)
credit :Kyaw Swar Myint
Posted by Burman Managers,Engineers and Scientists at 12:01 AM No comments:
ရွှေမင်းဝန်တောင် နှင့် တမာလမ်းကို အမြဲလွှမ်းနေပါတယ်။
Posted by Burman Managers,Engineers and Scientists at 11:28 AM No comments: